मलेशिया बाट आयो फेरी अर्को दु:खद खबर, सवारी दुर्घटनामा परी नेपालीको मृत्यु - E ALL NEPAL
मलेशिया बाट आयो फेरी अर्को दु:खद खबर, सवारी दुर्घटनामा परी नेपालीको मृत्यु
मलेसिया । आईतबार साँझ करिब साढे ८ बजे तिर मलेसियाको केडाह प्रदेशको कुलिम भन्ने ठाउँमा सवारी दुर्घटनामा परी एक नेपालीको मृत्य भएको छ । मृत्यु हुनेमा बर्दियाका सुरेश केसी रहेका छन् । उनी बिगत १० वर्षदेखि मलेसियामा काम गर्दै आएका थिए ।आइतबार बिदाको दिन साँझ नेपाली साथीहरूसँग भेटघाट गरी साईकलमा आफ्नो होस्टल फर्कने क्रममा पछाडीबाट आएको कारले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै केसीको ज्यान गएको हो ।केसी चढेको साईकल करिब ५०(६० फिट पर उछिट्यएको र छातिमा गाडिको टायरले किचेको बताईएको छ। अहिले केसीको शवलाई स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ। एम्बुलेन्स घटनास्थलसम्म आईपुग्दा टाउकोमा लागेको चोट र कानबाट अत्यधिक रक्तस्राव भएका कारण मृतकको घटानास्थल्मै ज्यान गएको बताइएको छ
।एजेन्सी – आयुष्मान खुराना फिल्म ‘वधाई हो’ मा आफ्ना बाबुआमाको सेक्स जीवन अझै क्रियाशिल छ भन्ने मान्न तयार छैनन् । फिल्मको एक दृश्यमा खुराना भन्छन् ‘यो पनि काहीँ बाबुआमाले गर्ने कुरा हो ।’ हास्यरसले भरिएको यो दृश्यले दर्शकलाई हसाउने काम मात्र गरेको छैन, यसले युवा पुस्तामा ‘बाबुआमा ४०÷५० वर्षको उमेरमा कसरी सेक्स गर्न सक्छन् ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यो फिल्मले युवाहरूका मनमा सेक्सका वारे नयाँ बहस चलाएको छ ।रुढीवादी सोचधेरैजसो युवाहरू एक समयपछि भाई÷बहिनी जन्मिनुलाई अचम्म मान्दछन्, त्यही केही युवाहरू यसलाई सामान्य मान्ने पनि छन् । तर प्रश्न के उठछ भने आधुनिक विचार राख्ने युवा पुस्ता आफ्नो अभिभावकको सेक्स जीवनमा किन यति संकिर्ण छन् ? जवाफमा कलेजका विद्यार्थी मनोज गौंड भन्छन् ‘तपाई नै सोच्नोस त, यति ठूलो भइसकेपछि जहाँ भाउजु सुत्केरी भएका, साथीहरुले बच्चा जन्माएकोे समाचार आइरहेको हुन्छ, त्यँही आमा गर्भवती भएकी छन्, भन्दा कस्तो लाग्छ ?’
हाम्रो यो उमेरमा हामी सेक्सका सबै कुरा बुझ्ने भएका छौं भन्दै मनोज भन्छन् ‘तर बाबुआमाको सेक्स जीवन अझै क्रियाशिल छ भन्ने सोच्दा अचम्म लाग्छ ।’
के सेक्स पावर घट्छ ?
अभिभावकको सेक्स जीवनका वारेमा सोध्दा २८ वर्षीय मुकुलको प्रतिप्रश्न छ ‘के त्यो उमेरमा सेक्स पावर कम हुदैन ?’ यसका वारे चर्चित सेक्सोलोजिष्ट डा. प्रकास कोठारी भन्छन् ‘जबसम्म श्वासप्रश्वास चलेको हुन्छ, तबसम्म मानिसले सेक्स गर्न सक्छ, किनभने सेक्सको कुनै उमेर हद् वा एक्सपायरी डेट हुदैन । मसंग त ८८ वर्ष सम्मका मानिस आफ्नो सेक्स परफर्मेन्स बढाउन आउँछन् । हरेक वर्ष ५ देखि १० जना ८५/९० वर्षका यस्ता मानिस मकहाँ आउँछन् ।’
सेक्स मानसिकतासंग सम्वन्धित छ
त्यसो भए के उमेर ढल्कदाँ सेक्स पावर घट्दैन ? यसको उत्तरमा डा. कोठारी भन्छन् ‘सेक्सका लागि ७० प्रतिशत असर तपाईको मानसिकताको पर्दछ ।यसमा यदी कुनै बृद्धले सोच्यो की अहिले म जवान छु, तब उसको त्रियाशिलता राम्रो हुन्छ । त्यही यदी कुनै जवान मानिसले आफू बुढो भएको सोच्छ भने उसको सेक्स परफर्मेन्स घट्छ । तर, ३०/४० प्रतिशत असर तपाइको दिमागी स्थिति, तपाईको हार्मोनको स्थितिमा पनि निर्भर हुन्छ । तर, हर्मोनजस्ता समस्याका समाधान खानपिनले पनि गर्न सक्छ । रक्त सञ्चार कम भए भियाग्राको साहारा पनि लिन सकिन्छ ।’ सौर्य दैनिकमा खबर छ ।त्यसकारण यसको अर्थ हो कुनै पनि उमेरमा सन्तान सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ ? डा. कोठारी भन्छन् ‘जहाँसम्म सन्तान पाउने उमेरको कुरा छ, पुरुष ९० वर्षको उमेरसम्म बाबु बन्न सक्छन् । तर महिला त्यतिबेलासम्म आमा बन्न सक्छिन् जबसम्म उनको महिनावारी चल्छ । आमरुपमा यो उमेर ४०/५० वर्षको हुन्छ ।
मनले मागेको पुराउने अमरनाथ मन्दिरलाई मनैबाट दर्शन गरि कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरौ! तपाईको मनोकांक्ष्या अवश्य पूरा हुनेछ
स्वस्तिमा खड्काको सन्कीने बानी, फेरी पर्यो पत्रकारसँग भनाभन [भिडियो हेर्नुहोस ]